जिम इरसेको मार्केटिंग जीनियस | Martech Zone
आइतवार, इन्डियानापोलिस कोल्ट्सले टेनेसी टाइटन्सलाई पराजित गर्दै एएफसी दक्षिण चैम्पियन्स बन्न पुगे। खेल भन्दा पहिले, कोल्ट्स मालिक जिम Irsay ट्विटर मा एक एकदम शानदार मार्केटिंग अभियान चलायो।
यदि तपाईं विवरणमा हुनुहुन्न भने, डिसेम्बर st१ बाट इरसेको ट्वीट्स समीक्षा गरौं:
एउटा प्राइस जित्न र $ K के this यस आइतबार दिउँसो १:१— मा लुकास तेल स्टेडियमको बाहिर उत्तर बाहिरी प्लाजामा कालो प्रियस पार्क गरिएको हुनेछ ...
एउटा प्राइस र $ K के IN जीत्नका लागि १rants बर्ष वा सो भन्दा पुरानो र ट्विटर डॉट कॉममा @ जिमिरसे अनुसरण गर्नुपर्दछ।
एक प्राइस जीत्न र person 4K — प्रति व्यक्ति एक प्रविष्टि, बहुविध प्रविष्टिहरूले तपाईंलाई अयोग्य ठान्छन् (मजाक गरेन)!…
एउटा प्राइस जीत्न र $ 4K pm यो आइतबार दिउँसो 1 बजे म एक प्रश्न ट्वीट गर्नेछु। तपाईं आफ्नो जवाफ ट्वीट गरेर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा प्राइस जित्न र K K के — उर ट्वीटमा तपाईंको नाम हुनु पर्छ किनकि यो तपाईंको ड्राईभर्स इजाजतपत्रमा देखिन्छ र @ जिमिरसे र # गोकलेटहरू समावेश गर्दछ।
यस प्रकारको पदोन्नतिको स्पष्ट लाभ खारेज गरौं। कुनै पनि समय तपाईले बहुमूल्य पुरस्कार दिनुहुन्छ भने तपाईले धेरै बज र ब्रान्डमा रुचि उत्पन्न गर्नुभयो। तपाईं वफादारी बलियो। तपाईं धेरै व्यक्तिलाई खुशी पार्नुहुन्छ, र सम्भाव्य रूपमा एक व्यक्ति अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। प्रतियोगिताहरू प्राय: उत्कृष्ट हुन्छन्।
तर कोल्ट मार्केटि team टोलीले यस अभियानको साथ एकदम उत्तम प्रदर्शन गर्‍यो, जुन यस्तो कुरा हो जुन महँगो हुन्छ र समय लिने समय लाग्दछ: उनीहरूले कोल्ट फ्यानहरू र ट्विटर ह्यान्डलहरूको सही सूची क्राउडसोर्स गरे।
यसकाे बारेमा साेच! महान् मार्केटिंगका लागि एक शुद्ध, सहि सन्दर्भ, डाटाबेस आवश्यक छ। ट्विटर जस्ता नयाँ टेक्नोलोजीहरूको विकासको अर्थ मानिसमा पुग्न नयाँ तरिकाहरू छन्, तर एकै साथ ट्विटर खाताहरूमा प्रशंसकहरू जडान गर्न सक्षम हुन यो अत्यन्त उपयोगी छ।
ट्वीटर प्रयोगकर्तामा एक उदाहरणको रूपमा हेर्नुहोस् @ DeadStroke96। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ एक विशाल NFL प्रशंसक हुनुहुन्छ आफ्नो ट्वीट्स पढेर। तर उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चिन्न कुनै तरिका छैन किनकि यो प्रयोगकर्ताले उसको ट्विटर प्रोफाइलमा नाम प्रदान गरेन। वास्तवमा धेरै व्यक्तिहरू केवल एक उपनाम, पहिलो नाम वा उपनाम अनलाइन प्रयोग गर्छन्। तपाईंसँग कसैमा हुन सक्ने सबै आधिकारिक डाटाको साथ क्रस-सन्दर्भको कुनै सजिलो तरीका छैन, जस्तै खरीद इतिहास, मार्केटिंग डाटाबेसहरू, इत्यादि।
तर अब, जिम Irsay (र सबैलाई) थाहा छ कि @ DeadStroke96 हो जर्ज केचम्यान। यो सयौं जस्तो देखिन्छ - यदि हजारौं होइन - मानिसहरूले स्वेच्छाले यस प्रतियोगिताको लागि स्वच्छ, सटीक डाटा दिए। ट्विटर खोजमा जानुहोस् तपाईको लागि। (तपाईं खोजी गर्न सक्नुहुनेछ "#gocolts @ jimirsay फुटबल" परिणाम संकुचन गर्न।)
एक सबै भन्दा राम्रो उत्पादकता वृद्धि काम अन्य व्यक्तिमा सर्नु हो। कोल्टहरूले जिम इरसेका अनुयायीहरू सबै ट्र्याक गर्न असंख्य घण्टा बिताउन सक्दछन्, उनीहरूको प्रोफाइलहरू र उनीहरूको ट्वीटमा हेर्दै उनीहरूको पूरा कानूनी नामहरू निर्धारण गर्न। वा, तिनीहरू जे भए पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, र मानिसहरूलाई कार्य आफैं गर्न दिनुहोस्।
राम्रो काम, जिम Irsay र कोल्ट मार्केटिंग टीम!
टैग: कल्ट्सजिम इरसेमार्केटिङ
Google र AMEX सानो व्यवसायको लागि नि: शुल्क भिडियो उत्पादन गर्दै
जनवरी 3, 2011 3:20 बजे
तर…. के यो $ 30,000 को लायक थियो? र के तिनीहरूले डाटाको साथ केहि गर्नेछन्?
जनवरी 3, 2011 5:24 बजे
यो एक राम्रो विचार हो ... तर ROI के हो? जब मैले शनिबार @jimirsay मा प्रमोशनको बारेमा पहिलो पटक ट्वीट पढें, लगभग 18,000+ फलोअरहरू थिए। मैले भर्खरै जाँच गरें र यो अब 20,000+ छ। के दुई हजार नयाँ अनुयायीहरूको मूल्य थियो?
जनवरी 3, 2011 6:11 बजे
मलाई शंका छ कि लागत पनि $ 30k को नजिक थियो। हामीलाई थाहा छ यो कम्तिमा $ 4k नगद थियो। यो सम्भव छ कि तिनीहरूले केहि मार्केटिङ व्यापारको बदलामा कुनै प्रत्यक्ष लागतमा कार पाए।
यदि कोल्टहरूले डाटा प्रयोग गर्छन् भने, हो, यो बिल्कुल $ 4,000 को लायक छ। Irsay का सबै अनुयायीहरूलाई वास्तविक वास्तविक व्यक्तिहरूसँग सन्दर्भ गर्नको लागि ठूलो टोलीलाई धेरै हप्ता लाग्छ, र यसले धेरै ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूलाई कभर गर्दैन जसको पहिचान तपाईंले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न।
निस्सन्देह, त्यहाँ जानकारीको अर्को टुक्रा छ: जो कोहीले अब यो सूची प्राप्त गर्न सक्छ, कोल्ट्स मात्र होइन। यसले तपाईंलाई यो अभियानको बारेमा केहि भन्नु पर्छ।
जनवरी 3, 2011 10:37 बजे
तपाईंले 'ठूलो टोली' को लागतमा पनि कारक गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् कि तपाइँ प्रत्येक 1 मिनेटमा3व्यक्ति, वा 20 घण्टामा क्रस-सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 20,000 अनुयायीहरूको लागि, तपाईंले 1000 मानव-घण्टा श्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई उचित $10/घण्टा डाटा प्रविष्टि स्थितिमा फ्याँक्नुहोस्, र तपाईं लागतको लागि अर्को $10,000 मा हुनुहुन्छ। अब तपाईं कार नि:शुल्क भएमा $14,000 मा, $30,000+ मा छुटमा हुनुहुन्छ भने।
(ओह, र सर्च.twitter.com ले लगभग एक हप्तामा यो सबै हटाउनु अघि तपाईंले तिनीहरूलाई आज नै यसमा सुरु गर्नु राम्रो हो! 🙂)
मलाई लाग्छ Irsay बज निर्माण गर्न, मानिसहरूलाई कुरा गराउन, इत्यादिमा उत्कृष्ट छ। र मलाई लाग्छ कि हामी सबैले उहाँलाई यो हुनसक्ने र हुनुपर्छ जस्तो डेटा प्रयोग गर्न मनपर्छ, तर मलाई वास्तविक रूपमा यो भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन।
उनको मुख्य उद्देश्य के हो? मानिसहरूलाई कोल्ट्स (र उहाँ) को बारेमा कुरा गर्ने र उत्साहित बनाउनुहोस्, र उहाँसँग धेरै पैसा छ र सामानहरू दिन सक्छ भनी देखाउन जारी राख्नुहोस्। के उनी यसमा सफल भए ? हो।
जनवरी 3, 2011 10:22 बजे
ROI केवल ट्विटर फलोअर्स स्टीव मा छैन। कुनै तरिकाले तपाईले यस प्रकारको ट्रिकल डाउन चीजको ROI मापन गर्न सक्नुहुन्न। इर्सेले कति जना अनुयायी पाए भन्ने कुरा नगरभर प्रचारप्रसार गर्ने संस्थाको अनुहारको बारेमा होइन। तिनीहरूले हामी जस्ता मार्केटिङ गिक्सहरूबाट प्राप्त गरिरहेका सबै पबहरूको लागि यो लगभग लायक छ। खेलहरू पहिले नै राम्रोसँग बिक्री भइसकेका छन् त्यसैले व्यापारिक बिक्री बाहेक Colts सँग आफ्नो ROI सुधार गर्न कुनै ठाउँ छैन।
जनवरी 4, 2011 मा 2: 07 एएम
कोल्टहरूले टिकटहरू मार्फत राजस्व प्राप्त गर्न सक्छन् ... तर प्रायोजन मार्फत धेरै थोरै प्राप्त गरिन्छ। प्रायोजकहरूले ठूलो संख्याको लागि भुक्तान गर्छन्। एक सामान्य कम्पनीको विपरीत, खेलकुद टोलीका प्रशंसकहरू वरिपरि टाँस्छन्। त्यसोभए एउटा राम्रो प्रश्न हुन सक्छ - कोल्ट्स फ्यानको जीवनकालको मूल्य के हो…। र के जिम इर्सेले यसो गरेर कोल्ट्सका प्रशंसकहरू बनाउनुभयो? मलाई लाग्छ उहाँसँग हुन सक्छ। मानिसहरू सधैं लिने टोलीहरूबाट थकित छन्... यो थोरै फिर्ता दिने राम्रो इशारा हो।
जो जुत्ता बनाउने
जनवरी 11, 2011 2:45 बजे
यो ROI, अनुयायीहरू, वा लागतको बारेमा होइन। यो एक अर्बपतिको अहंकारी रैम्बलिंगको बारेमा हो जसमा भावना भन्दा बढी पैसा हुन्छ। मेरो मतलब साँच्चै... उसले जेरी गार्सियाको गितारको लागि $1M तिर्यो। के तपाई साँच्चै सोच्नुहुन्छ कि उहाँ $ 30k को बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ?
जनवरी 12, 2011 मा 3: 45 एएम
पैसा र भावनामा कुनै समानता छैन भन्ने कुरामा म सहमत भए तापनि इरसे अहंकारी हो भन्ने कुरामा म सहमत छैन। धेरै जसो अवस्थामा, Irsay ले स्पटलाइटबाट बच्नको लागि सबै सम्भव गरेको छ। म उहाँसँग धेरै सम्पर्क भएका केहीसँग काम गर्छु र उनीहरूले मलाई भनेका छन् कि उहाँ धेरै नरम हृदय भएको एक अद्भुत केटा हुनुहुन्छ। यदि तपाईंले केही खोजी गर्नुभयो भने, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि उनले यहाँ इन्डियानामा धेरै परोपकारी संस्थाहरू राख्छन्।
जनवरी 12, 2011 मा 2: 45 एएम
वास्तवमा कसले कार जित्नुभयो?
जनवरी 3, 2011 3:32 बजे
म यस विषयमा ब्राडसँग छु। रोबीले कोल्टहरूले जानकारीको लाभ उठाउनेछ भन्ने ठूलो धारणा बनाउँछ। प्रो टोलीको लागि सामाजिक ठाउँमा तिनीहरूसँग सबैभन्दा खराब (किनभने यसको लगभग अस्तित्वहीन) उपस्थितिहरू मध्ये एक रहेको देखेर म त्यो मोर्चामा राम्रोसँग शंकास्पद छु। अब उनीहरूका फ्यानहरूले उनीहरूका लागि धेरै बोलपत्र अनलाइन गर्न दिएका छन् र यो ठीक छ तर अब जब इरसेले आफ्नो चेतनाको स्ट्रिम ट्वीट गर्दैछ र टिकट र कारहरू दिँदैछ यसको मतलब यो होइन कि संगठन बुद्धिमानी भएको छ। प्रतियोगिताका मापदण्डहरूले जिमको कानमा केही ट्विटर ज्ञान भएको व्यक्तिलाई संकेत गर्छ। हुनसक्छ डग र उनको साथी प्याट कोयलले कोल्टसँग I भन्दा राम्रो संगठनको रूपमा कुरा गर्न सक्छन्। यसमा अर्को मूल्य सम्भावित भविष्यका प्रायोजकहरूको लागि हो। टोयोटाले यसबाट केही उत्कृष्ट पब पायो, यद्यपि उनीहरूले जिमबाट थप मद्दत प्राप्त गर्न सक्थे र उनीहरूका स्थानीय डिलरहरूले सम्भवतः यसलाई प्रचार गरेनन् र उनीहरूले सकेजस्तो फाइदा उठाए। कोल्ट्ससँग साझेदारी गर्न खोज्ने सामाजिक ज्ञानी कम्पनीले यस प्रकारको सम्झौतामा उनीहरूको चप चाट्दैछ। कोल्ट्सको लागत कारको लागि सायद केही थिएन वा टोयोटासको टोलीसँगको साझेदारीको कारणले गम्भीर रूपमा छुट दिइएको थियो (कारको मूल्य टोलीले $ 20k भन्दा कम छ यदि तिनीहरूले यसको लागि भुक्तान गरे भने) कोल्ट्सले टोलीको रूपमा थप ट्र्याक्शन प्राप्त गर्ने थियो यदि पुरस्कार बढी भएको भए। तिनीहरू र तिनीहरूको उत्पादन वरिपरि संरचित तर प्रचारले चोट पुर्याउँदैन। Irsay को ट्वीटहरू फिल्टर नभएको देख्नु ठूलो कुरा हो तर मार्केटिङ दृष्टिकोणबाट मैले अझै धेरै अवसर र सुधारको लागि ठाउँ देखेको छु।
जनवरी 3, 2011 6:07 बजे
अथवा रोबीको जिब्रो अनुहारमा उसको गालामा छ।
यदि त्यसो हो भने, सर राम्रो खेलेको सर।
जनवरी 3, 2011 10:24 बजे
जनवरी 11, 2011 2:43 बजे
उनी अर्बपति हुन् । उसले ओछ्यानबाट उठ्न $ 30k खर्च गर्छ। गम्भीरतापूर्वक, यो पैसाको बारेमा होइन। यो अहंकार को बारे मा छ।
जनवरी 4, 2011 मा 4: 24 एएम
धेरै शानदार म भन्न चाहन्छु।
जनवरी 4, 2011 मा 4: 26 एएम
जिम इरसेको कार/नगद उपहार नियमहरू अनुसार, ट्विटले तपाईंको ड्राइभर इजाजतपत्रमा तपाईंको नाम समावेश गर्न आवश्यक छ। यद्यपि यो डाटा खनन उद्देश्यका लागि हुन सक्छ, मलाई लाग्छ कि यो धोखाधडी रोक्न थियो। उहाँसँग एक-ट्विट-प्रति-व्यक्ति सीमा थियो; तपाईलाई धेरै ट्वीटको लागि अयोग्य घोषित गरियो। "पूरा नाम" नियमले धेरै ट्विटर खाताहरू भएका व्यक्तिबाट धेरै अनुमानहरूलाई निरुत्साहित गर्‍यो।
जनवरी 11, 2011 2:41 बजे
पदोन्नतिको पछाडि कुनै पनि प्रकारको प्रतिभा छ भनेर मलाई विश्वास गर्ने कुनै कारण छैन। एक सुखद दुर्घटना, तर प्रतिभाशाली होइन।
जनवरी 15, 2011 6:54 बजे
जब कोही प्रसिद्ध (@jimirsay) Twitter मा सामेल हुन्छ र तपाईंले जम्मा गर्न वर्षौं लागेका फलोअरहरूको संख्यालाई पार गर्नुभयो भने यो सधैं नम्र हुन्छ!